DLULA Piper Apache 150 unyaka we-1954 FSX & P3D - Rikoooo
Play 11 877
Umbhali: Lynn, uBill Lyons, Updates by Noma-Cal Prop Club
nice kakhulu add-on nge cockpits ezine virtual ngemibala ehlukene kanye yokwenza ezine. imodeli enemininingwane kakhulu. Kuhlanganisa siko umsindo. Ukubuyekezwa ngu Nor-Cal Prop Club.
Piper zama-Aztec zikhuluma (noma Piper PA-23, ogama lakhe Apache futhi zama-Aztec) ingenye wokuqala twin-engined nomgibeli izindiza ezivela Boeing Piper Aircraft eyakhelwe 1959 ku 1982.